Hulu Mudzidzi Discount | Pamwe NaSpotify Premium (2020) - Varaidzo
Sei Kuwana Hulu Mudzidzi Discount mu2020?
Hulu ipuratifomu yakanakisa yevashandisi vanoda kuona varaidzo yemhando yepamusoro pamitengo inodhura. Iyo saiti inozivikanwa neayo rakakura raibhurari uye ine yakawanda yezvinyorwa zvekupa vatengi vavo. Iwe unogona kukurumidza kutanga kutarisa mamwe aunofarira anoratidza pasina kunetseka. Chirongwa chemudzidzi chekudzikisa chinobatsira vadzidzi vechidiki vanoda kushandisa zvakanyanya kubva pamari yavo. Vadzidzi vari mumakore ekuyaruka uye makumi maviri havakwanisi kubata mari.
Mudzidzi dhisikaundi inogona kuve nzira huru yekudzora kushushikana kwemari. Kutanga kubhadhara zvishoma zvekuvaraidza kwako nhasi nechirongwa ichi. Muchirongwa ichi, isu tichafumura nzira dzaunogona kudzikamisa kunyorera kwako.
Hulu Mudzidzi Discount - Pfupi Ruzivo
Hulu naSpotify vakabatana pamwechete kuti vape vadzidzi mamwe mabhenefiti. Iye zvino unogona kuwana mimhanzi uye vhidhiyo kuvaraidzwa nekunyorera kumwe chete. Inobatsira kuchengetedza yako mari zvakanyanya. Kana iwe usiri kuziva, Spotify inokosha pamhepo yekutenderera sevhisi. Vashandisi vanowana mukana weSpotify premium, Hulu (inotsigirwa neshambadziro), uye nguva yekuratidzira zvese pasi pemuraira mumwe. Iyo inonzwisisika mhinduro yemari kune vadzidzi vanoda kuchengetedza mari. Tinokurudzira izvi kune vese vaverengi vedu vanoda kuwana zvakawanda.
Chikamu chakanakisa nezve kunyoreswa uku ndechekuti iwe unowana zvese izvi zvemahara kwemwedzi mitatu. Pakazara hapana chaicho chinokanganisa kushandisa iyo mudzidzi kudzikisira. Iwe unowana mukana wekuvaraidzwa kusingaperi neese matatu ekunyorera.
Mutengo weHulu mudzidzi Discount:
Mudzidzi dhisikaundi inoderedza mutengo wevaraidzo zvakanyanya. Vashandisi vanogona kunakidzwa nemasevhisi matatu pamutengo wepasi peimwe. Chikamu chakanakisa ndechekuti mwedzi mitatu yekutanga inguva yekuyedza. Hapana chaunobhadhariswa chero chinhu panguva ino. Iyi inzira huru yekuchengetedza mari pane yako yekushandisa varaidzo. Ese matatu masevhisi anowanikwa emadhora 4.99 + mutero mushure memwedzi mitatu. Mazuva ano pane nzvimbo zhinji dzekushambadzira dzinowanikwa pa internet. Kana iwe ukatenga chero kwese, ipapo iwe unozopedzisira uine rakakura strain pane chikwama.
Nzira yekuwana sei Netflix Student Discount?
Ungawana sei Hulu mudzidzi kudzikisira?
Hulu mudzidzi kudzikisira zviri nyore kuwana kune vadzidzi vanoda kuchengetedza mari yavo. Unogona kushandisa mari yakachengetedzwa kumwe kunhu. Nzira huru yekuchengetedza zvakanyanya ndeyokuparadzanisa bhiri pakati peshamwari shoma. Kune zvirambidzo zvakanyanya pakushandisa Hulu pane akawanda madhizaini. Aya matanho ekuti iwe ugone kugonesa.
Vashandisi vanofanirwa kutanga bhurawuza pakombuta yavo. Mudzidzi dhisikaundi inowanikwa kubva Spotify yepamutemo saiti. Iyo Hulu saiti haina chero gadziriro yekunyorera kune yavo bundle chirongwa. Dzvanya pane inotevera link - https://www.spotify.com/us/student/ . Ichakutora iwe kune iyo mudzidzi bundle peji.
Pane peji rekumba, iwe unowana iyo 'tora mwedzi mitatu yemahara' bhatani. Dzvanya pairi kuti utange neyekunyora maitiro. Vashandisi vanofanirwa kusaina neakaundi nyowani papuratifomu. Iyo yakanaka nzira yekutanga neichi chiitiko.
Vashandisi vanofanirwa kupinda mukati kune iripo Spotify account kana kugadzira imwe nyowani. Iwe une mukana wekupinda uchishandisa yako yemagariro midhiya anobata senge Facebook kana Apple ID futi. Kana iwe usina account, tinya pane 'sign up for Spotify' bhatani.
Paunenge iwe wagadzira account pachikuva, iwe unogona kuwana yeiyo mudzidzi kudzikisira. Spotify inoshandisa nzira yekusimbisa kuratidza kana iwe uri mudzidzi anoshanda. Maitiro ekuongorora anotora maawa mashoma, zvinoenderana neyako koreji. Vashandisi vanogona zvakare manyore kuongorora kwavo kukoreji kunyoresa kana ivo vari kutarisana chero nyaya.
Kana nhoroondo yacho yabudirira, vashandisi vanogona kubhadhara. Spotify neHulu vanobvuma kubhadhara kuburikidza nemakadhi echikwereti uye echikwereti. Iwe unogona zvakare kushandisa Paypal kusainira iwo masevhisi. Iyi inzira huru yekutanga kuwana varaidzo yemhando yepamusoro pamazuva ano. Ita muripo uye tanga kushandisa Hulu nesimba. Mari yacho ichabatsira gare gare. Iyo $ 4.99 huwandu hunotorerwa mushure memwedzi mitatu yekuyedza nguva.
Makorokoto! Iwe wakabudirira kuwana iyo Hulu mudzidzi kudzikisira paakaundi yako. Vashandisi vanogona kumisikidza iyo Hulu account kubva kuSpotify marongero. Iyo yakafanana vhezheni ikozvino inogona kushanda pamapuratifomu ese.
Sei Nemaoko Kuongorora Hulu Mudzidzi Discount?
Vazhinji vashandisi vanogona kupedzisira vatarisana nekanganiso yekuongorora. Spotify inoshandisa chishandiso chega chega kuona kuti kunyoreswa kweprimiyamu kuchigadziriswa nekukurumidza. Iyo yemhando yekuongorora maitiro inobatsirawo kune vanhu vasingakwanise kuongororwa. Pano iwe uchafanirwa kupa ruzivo rwakakodzera nezve yako koreji kana kuyunivhesiti. Pakazara webhusaiti yeSpotify inosimbisa kana iwe uri kudzidza mune inoshanda kosi kana kwete. Inoshanda nemakoji mazhinji eUS. Hulu inoshandisawo imwecheteyo sisitimu yekutarisisa yevadzidzi vayo vadzidzi. Iwe unofanirwa kuendesa zvinyorwa zvekugamuchirwa kwako kukoreji.
Iyo yakapusa koreji ID kadhi inobatsira kuti basa riitwe. Vashandisi vanogona kudzvanya pikicha nefoni yavo uye nekuiisa papuratifomu yekusimbisa manyore.
Inguva yakadii iyo mudzidzi kuderedzwa aripo?
Iyo Hulu uye Spotify yemudzidzi dhisikaundi inowanikwa kune vashandisi kusvika 30th Chikumi 2020. Iwe unofanirwa kuita pane yako instinct uye uwane kunyorera nhasi. Iwe hauzive kuti ichave yakanyanyisa nguva. Iko kupihwa kamwe mune yehupenyu mukana wevanhu vanopedza yakawanda nguva online. Kana ukangosaina kuti utore mari, uchakwanisa kuwana mabhenefiti ayo kwegore rimwe chete. Mwedzi mitatu yekutanga mahara. Nguva yekuyedza painopera, vashandisi vanofanirwa kubhadhara kunyoreswa kwemwedzi mipfumbamwe inotevera.
Ndiani anokodzera kuwana Discount?
Chero ani ari kudzidza kukoreji kana kuyunivhesiti muUSA anogona kujoina chirongwa chevadzidzi. Vashandisi vanooneswa otomatiki vachishandisa iyo SheerID system. SheerID dhatabhesi yekunyoresa vadzidzi inobatana nemasosi mazhinji edzidzo. Ivo vanoita iyo yekuongorora maitiro pakarepo kune saiti. Ivo vane mamwe mabasa ekuzivisa futi, semauto, vanamukoti, uye vanachiremba. Iyo dhatabhesi yakakura kwazvo, saka iwe unozviwana iwe uchisimbiswa zviri nyore.
Hulu inzvimbo huru yevaraidzo yevanhu kutenderera pasirese. Vaverengi vazhinji vanogona kusahadzika pamusoro pechirongwa chekudzikisira mudzidzi. Muchirongwa ichi, isu taitarisira kupindura yako yese mibvunzo. Nakidzwa nekushambadzira zvemhando yepamusoro zvemukati pane ako ese zvigadzirwa nhasi nemutengo unodhura.
Amazon Prime Mudzidzi Discount (2020)
Ungawana Sei Inonzwika Student Discount?
Adobe Yakagadzika Cloud yeVadzidzi - Grab Special Discount
activation kodhi yepluto tv
amazon prime vhidhiyo haisisina mahara
kutarisa echirungu mafirimu online mahara pasina kurodha pasi
tarisa epamhepo mafirimu emahara kutenderera
enda pamusoro unblocked 77
yemahara tv akateedzera online hapana kusaina kumusoro
yemahara mawebhusaiti mawebhusaiti hapana kusaina kana kurodha pasi